Android အတွက်အကောင်းဆုံးအင်တာနက် browser များ Androidsis
Android အတွက်အကောင်းဆုံး browser များ
La Android အတွက်ဝက်ဘ်ဘရောက်စာအမျိုးအစားသည်ယနေ့လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားရှိသည်၊ များစွာသောကိစ္စရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို browser ကိုရှိပါတယ်နေစဉ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ထိုက်သော နှင့်သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် browser တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကားရှုထောင့်အခြားထက်တ ဦး တည်းပိုကောင်းပါစေ။ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုပြုရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်တစ်ခုကမင်းနဲ့မင်းကိုထားခဲ့မယ် Android အတွက်အကောင်းဆုံး browser များစာရင်း.
ဤစာရင်းမှ Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ထားပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုမိုဆိုးဝါးသည့်ဘရောက်ဇာဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Android ဖုန်းများအားလုံးသည်၎င်းကိုသယ်ဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် install လုပ် browser ကို။ ဒါ့အပြင်လက်ရှိအများဆုံးအသုံးပြုတ။ ဤဆောင်းပါး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအခြားလူကြိုက်များသောလူသုံးများသောအခြား browser များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ Android အတွက်ဤ browsers များကိုသိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
2 UC Browser ကို
3 Samsung ကအင်တာနက်ကို Browser ကို
5 လင်းပိုင် Browser ကို
6 Firefox ကို
Un အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာကိုအောင်နိုင်ခဲ့သော browser ကို။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်သန်း ၅၀ ကျော် download လုပ်မှုများရှိသည်။ အလွန်ကောင်းသော ratings ရှိခြင်းအပြင်။ Isaလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည့် Android အတွက် browser။ ၎င်းတွင်အသုံးပြုသူအများစုကြိုက်မည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ CM Browser ကကမ်းလှမ်းသည် ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း.
အဲဒီမှာရှိပါတယ် ပေါင်းစပ် antivirusအဲဒါကိုအလွန်လုံခြုံတဲ့ browser တခုဖြစ်စေတယ်။ သင်အန္တရာယ်ရှိသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ၀ င်တော့မည့်အချိန်တွင်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ အရမ်း ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဗီဒီယိုများကူးယူနိုင်သည်မဟုတ် YouTube ကနေပေမယ့်။ ဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်မှုမရှိသောပြီးပြည့်စုံပြီးအလွန်ပေါ့ပါးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
CM Browser-fast downloads, privacy
ရေးသားသူ: cheetah မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး
မကြာသေးမီကာလများအတွင်းလူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည့်ဘရောင်ဇာတစ်ခု။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကတော့သူတို့သိပြီးသားပဲ တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမြဲတမ်းအလွန်တိကျမှန်ကန်သော update များဖြင့်အာရုံစိုက်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏မြန်ဆန်သောလမ်းညွှန်မှုအတွက်ထင်ရှားသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပါဝါအပြင် အွန်လိုင်းမှတေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ ရိုးရိုးလေးပါ။
La UC Browser မှကမ်းလှမ်းသောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးပြုလုပ်သောဘရောင်ဇာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများ နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းမုဒ်ကိုဖွင့်ခြင်းစာသားအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Android ကိုဆက်လက်အခြေပြုနေတဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
UC Browser - လူကြိုက်များတဲ့ဗီဒီယိုများ
ရေးသားသူ: UCWeb Singapore Pte ။ Ltd.
El ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏ကိုယ်ပိုင် browser ကို။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီကသူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် မည်သည့် Android အသုံးပြုသူမဆိုဤ browser ကိုသုံးနိုင်သည်။ Samsung ဖုန်းဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် အရည်အတှေ့အကွုံ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုမျိုးစုံကိုခွင့်ပြုထားသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ ရှာဖွေမှုများပိုမိုလုံခြုံရန်အတွက် tabs နှင့် section များကိုချိန်ညှိပါ။ ဗီဒီယိုလက်ထောက်လည်းရှိတယ်။ Samsung Internet Browser သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်မဆိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သုံးရန်လွယ်ကူသော option တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
ဒါဟာအတော်လေးစပ်စုအမှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ Opera ၏ Mini version သည်မူရင်း version ကိုရမှတ်များထက်သာလွန်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ Opera Mini သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဒေတာသိမ်းဆည်းပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အချိန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဓိကပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အခြားဘရောင်ဇာများကဲ့သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုမရရှိနိုင်ပါ ဤစာရင်းမှ။ သင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းအတွက်ပေါ့ပါးပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော browser ကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာတာရှည်တစ် ဦး အဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ခဲ့သည် Google Chrome နဲ့ Firefox တို့အစားထိုးနိုင်တယ် Android ဖုန်းများအတွက်။ ဒါဟာတ ဦး ဖြစ်ခြင်းအဘို့အထွက်ရပ် ပိုပြီးပြည့်စုံ browser များ လက်ရှိတည်ရှိ။ သူတို့ကအမြဲတမ်းအလွန်ပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဟန့်တားနိုင်သော်လည်းအလွန်ကောင်းသောအရာ
သော်လည်း Dolphin Browser သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရရှိနိုင် ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်း, အခြားအင်္ဂါရပ်များအကြား incognito browsing နှင့် flash player ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသော browser များထဲမှတစ်ခု။
Dolphin Browser Web Browser
ရေးသားသူ: လင်းပိုင် Browser ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှပျောက်ဆုံးမရနိုငျသောဂန္။ Firefox သည် browser တစ်ခုဖြစ်ပြီး Google Chrome ၏အရိပ်အောက်တွင်အမြဲရှိနေသည်။ ဒါပေမယ့်သူမနာလိုစရာဘာမှမရှိဘူး။ ၎င်းသည်များစွာသောလူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အလွန်အလိုလိုသိသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီးအချက်အလက်များကိုတင်ပို့သည့်အရှိန်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အလေးထားရမည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုများရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ browser ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android device မှာပိုပြီးထိရောက်စွာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားရန်ကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအချိန်ယူကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ် Android အတွက်၎င်း၏ဗားရှင်းတိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တရားစီရင်ဖို့အဲဒါကိုအသုံးပြုရကျိုးနပ်သည်။
ဒါကငါတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် Android အတွက်အကောင်းဆုံး browser များ။ ခင်ဗျားကြိုက်တာတစ်ခုရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဘယ် browser ကိုသုံးလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံး browser များ
အဲဒါပေါ်လာကတည်းကငါ Adblock Browser ကိုငါ့စက်တွေမှာသုံးတယ်။ ၎င်းသည် privacy ကိုလေးစားသောမြန်ဆန်သော browser တစ်ခုဖြစ်သည်။
Super Mario Run ကိုအကြိမ် ၂၀၀ မီလီယံဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အမြတ်အစွန်းမရခဲ့ပါဘူး